यस्ता छन् सिस्नो खानुको अपत्यारिला फाइदै फाइदा ! - Samatal Online
यस्ता छन् सिस्नो खानुको अपत्यारिला फाइदै फाइदा !
१ कार्तिक २०७६, शुक्रबार Santa Kumar Shrestha0Comments
सिस्नो सवैले देखेको र चिनेको वनस्पति हो । पहिले पहिले सिस्नोलाई गरिबको खानाको रुपमा तुलना गरिने भए पनि पछिल्लो समय सवैले तरकारीका रुपमा प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ ।
शहर बजारमा पनि पछिल्लो समय सिस्नो बेच्न ल्याउने गरिन्छ । सुपर मार्केटमा समेत सिस्नोको पाउडर बनाएर बेच्ने गरेको पाइन्छ । सिस्नोमा क्याल्सियम, प्रोटिन, भिटामिन सी, फ्याट, कार्बोहाइड्रेट, फाइवर, फस्फोरस र आइरनजस्ता तत्त्व पाइन्छन् ।
सिस्नो खानुका फाइदा
सिस्नो गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई खुवाउनु अत्यन्तै फाइदाजनक मानिन्छ। सिस्नोले मुटुसम्बन्धी समस्या निको पार्न सहयोग गर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । सिस्नो सेवनले उच्च रक्तचापलाई नियन्त्रण गर्नमा सघाउ पुर्‍याउँछ। यो मधुमेह रोगीका लागि पनि निकै उपयोगी हुन्छ।
त्यसैगरी प्रोस्टेड ग्ल्ण्याड र बाथको समस्या भएका मानिसलाई पनि सिस्नोले फाइदा पुग्छ। शरीरमा रगतका नयाँ सेल बनाउनमा समेत यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।
त्यस्तै, पिसाबको संक्रमण हुनेहरूले पनि नियमित सिस्नो सेवन गर्दा फाइदा पुग्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । शरीरमा भएका विभिन्न एलर्जीको समस्या समाधानमा पनि सिस्नो सहयोगीसिद्ध हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर शरीर दुख्ने समस्यामा पनि सिस्नो लाभदायी मानिन्छ ।